Tag: melbourne it | Martech Zone
Tag: melbourne ya
You na-arụ ọrụ na ngalaba na-edeba aha ma ọ bụ a Reseller?
Ebe ọ bụ na anyị na ndị na-achụ ego na-arụ ọrụ ntakịrị, ha na-arịọ anyị mgbe ụfọdụ ka anyị rụọ ụfọdụ ọrụ na mpụga iwu maka ụlọ ọrụ. Otu onye ọchụnta ego anyị na-arụ ọrụ na-ewe anyị n'ọrụ oge ụfọdụ iji mee ka ịzụrụ ngalaba ha. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ịnwe ụlọ ọrụ oge na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ ndị a ebe ọ bụ na ọ bụ obere mkparịta ụka na nnukwu ego na-aga n'etiti ndị ọzọ. Usoro a pụtara n’ihu. Anyị na-ahu nagide a atọ